KAREN NATIONAL LEAGUE (JAPAN): ဘုရားသုံးဆူတွင်ံပစ်ခတ်မှု ရုပ်သံKaren Armed Group Burns House in Three Pagodas Pass
ဘုရားသုံးဆူတွင်ံပစ်ခတ်မှု ရုပ်သံKaren Armed Group Burns House in Three Pagodas Pass
Karen Armed Group Burns House in Three Pagodas Pass
IMNA – This morning at 11:55 a.m. Burmese time,aKaren armed group shot RPG fire ataThree Pagodas Pass (TPP) resident’s home.
Coming from Taung Wine road, the Karen armed group drove into town with four vehicles and around 30 soldiers, and deliberately shot TPP resident, Aung Tin Win’s, home with RPG fire. Aung Tin Win owns the largest store in TPP town, selling gold, watches, and timepiece products.
The Burmese military was nowhere to be found, leaving residents and Thai officials from the Thai fire department to try and put out the fire.
TPP residents have commented that Aung Tin Win is known as pro-Burmese government, concludingapossible reason for being singled out by the Karen armed group. His house and store are located behind the Sa Ya Pha (Military Intelligence Office) and in front of the daily central TPP market.
“Now nobody dares go inside the town” saidaTPP resident who moved to Tom Dote point village,aNew Mon State Party (NMSP) controlled area, recently with his family.
He added, “I picked up my sister from school. Nobody was at the school.” Once teacher’s heard RPG- fire they allowed children to return home or to be picked up by their parents.
Aung Tin Win's storefront home in Three Pagodas Pass after it was hit by RPG fire
The Burmese Military did not arrive in TPP town until the Karen armed group left the area, and thus far, the Burmese Army has not yet responded to the incident.
Residents are not sure which Karen armed group was represented this morning. Yesterday, though, around 300 troops from both the Democratic Karen Buddhist Army (DKBA) and the Karen National Liberation Army’s Brigade6met up five kilometers from TPP town.
These two Karen armed groups have joined forces and demandedaremoval of Burmese troops from Mae Khasa village, Karen State and threatened to seize TPP town in the case that Burmese troops refuse to do so.
TPP town is an area fraught with conflict. After the Burmese nationwide elections in November 2010,arenegade group from the DKBA seized TPP town, and last week, on June 5th, the Military Intelligence office was bombed, resulting in the death of two and wounding four
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 9:08 AM
ဗမာ့တပ်မတော် ခမရ ၂၈၃ လက်ချက်ဖြင့် ၇နှစ်သား ကရင်ကလေ...
Motorbike gunmen target Burma army soldiers
Burma army shelling displaces 200 villagers
KNLA attack kill 8 and wound7Burmese soldiers
အိန္ဒိယထောင်မှ လွတ်မြောက်လာသော ကရင်နှင့်ရခိုင်တော်လ...
နေကိုမြိုချင်လျှင် နေထက်ပူနေရမည် အီးမေးမှတဆင့်လက်...
ကေအိုင်အေကို ဖိနှိပ်တိုက်ခိုက်ခြင်းမဟုတ်၊ မိမိလြုံ...
ဗမာ့တပ်မတော်နှင့်ကချင်တပ် တိုက်ပွဲ နောက်ဆက်တွဲ ကြာ...
နေပြည်တော်အတွင်းရေး - 16 June 2011
ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိူးများ ဖယ်ဒရယ်ကောင်စီ ...
နေ့ စဉ်သတင်း - 17 June 2011
Kachin Refugees Flee Conflict
Hollywood starlet visits refugees
17 Jun 2011 Yeyintnge's Diary
Over 10,000 refugees flee to China border
တောင်အာဖရိက သံအမတ်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ...
RFA Burmese Webcast, June 3rd Week, 2011
ရန်ကုန်လေပြင်း ပျက်စီးမှုများရှိ ...
အိန္ဒိယ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မြန်မာပြည် သွားမည်
KIO က စတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ဟု အစိုးရပြော
“They will burn the village until it turns to ash”...
ဘုရားသုံးဆူတွင်ံပစ်ခတ်မှု ရုပ်သံKaren Armed Group...
နယ်ခြားစောင့်တပ် လက်မခံ၍ ပေးထားသော ပစ္စည်းများ ပြန်...
ကေအိုင်အေ သုံ့ပန်းဓာတ်ပုံသေဆုံးသူရဲ့ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက် ...
Burma Nukes? Defector's Tale Stokes Suspicions
နေပြည်တော်အတွင်းရေး - ဗမာ့တပ်မတော်က တရုတ်ကို အကူညီ...
NLD fund raising event 16.6.2011
တြိဂံတိုင်းမှူး ရှောင်တခင် စစ်ဆေးခံရ
နိုင်ငံတကာ ဒုက္ခသည်များနေ့ ပြပွဲ မဲဆောက်၌ ကျင်းပ
မန္တလေး ခေါင်ရည်ဆိုင်မီး ဆိုင်ခန်း ၁၀ ခန်းခန့် လောင...
“ဒီနေရာကို သူတို့ လိုချင်တယ်” အင်တာဗျူး
ကချင်သို့စစ်ကူသွားမည့် ချင်းပြည်က မြန်မာအစိုးရစစ်သ...
ဆန်ဂန် တိုက်ပွဲတွင် မြန်မာတပ်ရင်း ၂ ရင်းပြုတ်
နေပြည်တော်က အစိုးရဝန်ထမ်းတွေဆိုတာ ....
ကချင်ပြည်နယ်ကို စစ်ကိုင်းတိုင်းအတွင်း ထည့်သွင်းသတ်...
KIA စနိုက်ပါတပ်ဖွဲ့ လက်ချက်ကြောင့် မြန်မာစစ်သည် အမ...
ဘုရားသုံးဆူမြို့တွင် နေ့ခင်းဘက် ၀င်ရောက်ပစ်ခတ်မှြုေ...
ချောင်းကူးတံတား KIA ချိုး၊ စစ်တပ် ထောက်ပံ့ရေး လမ်း...
တာပိန်ရေကာတာသို့ ဆက်သွယ်ပေးသော အဓိကတံတား KIA ဖျက်ဆ...
အကယ်ဒမီ နွဲ့နွဲ့မူ ကွယ်လွန်
ကျနော်တို့ဆီမှာဗျာ..... ရေးသားသူ ။ ။ moethaukkye M...
KNU တပ်မဟာ ၃ နှင့် မြန်မာစစ်တပ် တိုက်ပွဲ (မှတ်တမ်း...
Zoya Phan - Oslo Freedom Forum 2011
Karen Newsletter (May-2011)
တင်းမာမှုဒီဂရီ တိုးပြလာနေတဲ့ မနောမြေက သေနတ်သံများ
ကော့ကရိတ်-မြ၀တီကားလမ်းကို တစ်ချိန်တည်း(၄)နေရာ ၀င်တ...
နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်အရ ဒေါ်စုကို ထောက်ခံခြင်းဖြစ်ကြောင...
ထိုးစစ်ရပ်ရန် KIO က အစိုးရကို ရာဇသံပေး
ဗမာ ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်း ဗမာ = မြန်မာ ?
နေပြည်တော် မြို့မဈေးတွင် ဗုံးကွဲ
တိုက်ပွဲနှင့်လူ့ အခွင့်အရေးချိူးဖေါက်မှု သတင်း
နေပြည်တော်အတွင်းရေး - 12 June 2011
STATEMENT of The 6th Ethnic Nationalities Conferen...
ပစ်ခတ်မှုကြောင့် မဲ့ကသာရွာသား အားလုံးနီးပါး ထွက်ပြေ...
ရန်ကုန်တိုင်းမှာ လေဆင်နှာမောင်း တိုက်၍ ဈေးနှင့်ေ...
မြန်မာ့လူမှု တရားမျှတရေး ILO ကူညီဖို့ ဒေါ်စု ပန်ကြား...
မြန်မာနိုင်ငံ ဦးတည်ခဲ့တဲ့ လက်နက်တင် မြောက်ကိုရီးယ...
KIA နဲ့ အစိုးရတပ်တိုက်ပွဲ ကချင် ရှေ့တန်းစခန်းတခု လ...
Thursday, June 9, 2011 Karen refugee
ဒီပဲယင်း ခရီးစဉ်အတွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လိုက်ပါသ...
66th birthday-Lashio Thein Aung Jimmy Jack.mp4
RFA Burmese Webcast, June 2nd Week, 2011
မြန်မာစစ်တပ်က တိုင်းရင်းဒေသတွေမှာ ထိုးစစ်ဆင်မှု ရပ်...
သက်တမ်း (၃၀၀) အင်းဝခေတ်ဘုရား စိန်ဖူးတော် ပျောက်ရှ
Reports » Photosets February 24th, 2011 KHRG Phot...
Kwekalu -kklvol14no3-may 2011 June 11, 2011
မြန်ပြည် ကားဈေးတွေ ထိုးကျလာအုံးမည်
ဗီယက်နမ် က အငြင်းပွားရေပိုင်နက် မှာ အမှန်တကယ် ကျည်...
ဘုရားသုံးဆူတွင် အစိုးရစစ်တပ်များ စစ်ရေးပြင်ဆင်မှုမျ...